Ganacsiyada ma u baahan yihiin bar internet? | Suubbis Blog
Xaqiiqo la yaab leh ayaa ah sida ganacsiyada intooda badan aysan haysanin websaydh. Waxaad u maleyneysaa in xilligan casriga ah qof kasta oo u ogaan lahaa sida ay muhiim ugu tahay website-ka ganacsigisa. ma Cada In Ganacsi kasta oo islamarkaas heysanin Websaydh casri ah in aay ka maqan tahay Awood suuq geyn oo xogan
Tirada ugu badan ee macamiisha wax gato waxaay wataan kombiyuutarada, taleefonnada casriga ah si aay u baraan shey kasta kahor inta aysan iibsan. Haddii aadan haysanin meherad ganacsi waxaad ka maqan tahay dhammaan ganacsigan. Xitaa haddii aadan qorsheyneynin iibinta alaabooyinkaaga ama adeeggaaga internetka aad iibiso, waxay weli u badan tahay inay baaritaan ku sameeyaan internetka oo raadido ganacsiyada meelaha ay wax ku iibiyaan iyo waxa ay u baahan yihiin in aad iibisaan.
Websaydh muhiim ayuu ku yahay wuxuu ku gu cawinaa in aad Sameysato Ganacsi si kalsooni leh.
Waxaa jira xaqiiqooyin la hubo qaar ka mid ah ganacsiyada yaryar ee aan lahayn websaydh iyo iyada oo aan mid kood ne la socon sida ay usii joogi doonaan,Ganacsiyadaas yar yar. Haddii uusan lahayn websaydh, macaamiisha laga yaabo inay u maleynayaan inaad tahay shirkad waqti-yar Jirta oo aan aysan Ganacsigaaga Waxa badan ka iibsanin.
websaydhka ma aha oo kaliya inuu ku siiyo kalsooni laakiin waxa uu kaa caawin karaa inaad bixiso aragti ah in shirkadaada ay kalsooni weyn qabta oo ay kuu guulaysan karto marka waxaa laga yaabaa inay dhab ahaantii noqon karto mid saxan.
Qaybo ganacsiyada yaryarka ah ee tartan farshaxan oo waaweyn ku jiro Google ah iyo helitaanka qaar ka mid ah kuwa tartanka ku jiro Waxaa yaab leh weli waxaa jira ganacsiyo badan oo aan haysanin websaydh-yo, waxaa jira sababo kala duwan oo aay websidh uleheen, laakiin inta badan waxay u muuqataa in milkiilayaasha ganacsiga ay ku qanacsan sanin bogagga internetka. Waa wax laga yaabaa inaysan ogayn in website loogu dhisi karo lacag aad u yar. Uma baahnid shabakad toban kun oo bog leh oo ganacsigaaga ah, kaliya meel sahlan oo dadka ugu sheegto shirkaddaada, waxa aay tahay, adeegyada iyo faahfaahinta xiriirka. iyo wax yabaha laxiriro.
In ka badan 2.2 bilyan oo dad ah ayaa isticmaalo internetka , internetka ayaa isbedelay sida ay macaamiishu u heleen sida aay ula wadaagaan macluumaadka Dunida internetka waxaa uu ka ballaaranyahay xawaalad, mana muuqato calaamado muujinaya inay hoos u dhacayso Ganacsigaaga. Haddii aad raadinayso adiga, macaamiil badan, ama dadka ay saameyn ku gu yeeshaan, webku waa meesha ganacsigaagu u baahan yahay. In ka badan 82% dadka aduunka waxey isticmaalaan internetka, ma ahan wax la yaab leh in ganacsiyada websaydhka leh ay dakhliyo ka helaan sannadkii aay ka badan yihiin kuwa aan lahayn bogagga internetka.
websaydh yada waa kuwoo dhinac kasta ku racayo marka ganacsigaa uu soo baxo ama oo soo koro
Goobaha internetka waa kuwo dabacsan oo kori kara marka ganacsigaagu uu soo baxo. Website-yada waxay sidoo kale ku oggolaanayaan ganacsigaadu in ay diyaar noqdaan 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii, dhammaan sanadka oo dhan. Ha ka tegin boodhka, bogagga internetka waa mid ka mid ah qalabka ugu kharashka yar ee laga heli karo faido, hadda ka faa’iidaysta awooda website-ka .